Date My Pet » Katz amin'ny alika : A Commonsense Torolalana ho an'ny Training sy Living amin'ny alika
amin'ny Jon Katz
Last nohavaozina: Nov. 28 2020 | 9 min namaky
Dia ny fanontaniana tokony hananganana alika tompony hangataka voalohany, angamba ny tena zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olona amin'ny alika:
Ny tena fanapahan-kevitra fanakianana momba ny fiainantsika amin'ny alika dia matetika atao alohan'ny mitondra an-trano iray. Mahazo ny alika any Amerika dia disturbingly
tsotra. Afaka trawl an-tserasera, hahita ny mpiompy, na maka iray amin 'ireo ankizy ny sasany Puppies dia fanatitra ivelan'ny magazay lehibe (Dia tsy manoro hevitra azy). Ianao
ho tonga manerana ny nania raha mandeha an-tongotra na mitondra fiara avy. Ny olona sasany mitady alika ny vatolampy-mafy ny antony azo ampiharina: fiarovana, fihazana, fitsaboana, fikarohana-ary-famonjena. Fa ny ankamaroantsika dia, hoe psikology sy ny behaviorists, sarotra kokoa-pihetseham-po sy ara-tsaina ny antony manosika.
Nahoana aho no te A alika?
Ny mainka sarotra ny olombelona no mampifandray amin'ny hafa, no vao mainka mitodika any alika (sy ny biby fiompy) mba hameno ny banga sasany. Dia toa Tokony ho tia sy ho tia amin'ny fomba izay no tsotra, madio, ary azo ianteherana.
Amerika ankehitriny dia, amin'ny fomba maro, ny Nizarazara, ny nandao ny fiaraha-monina. Ny fianakaviana no omena nifindra; dia matetika isika no tsy mahalala ny mpiara-monina; lavaka maro amintsika ny amin'ny alina, nibanjina karazana efijery iray na hafa. Ny fisaraham-panambadiana dia mahazatra. Ny asa ho miovaova, tsy azo antoka ho an'ny maro, matetika mahafinaritra. Maro ny olona toa mora kokoa ny miaina sy mifandray amin'ny alika noho ny amin'ny hafa, ary toy izany koa ny fatorana ny olona sy ny alika mitombo hatrany mafy orina kokoa.
Kanefa fivoarana izany ao amin'ny fifandraisana ny karazana roa ireo no manenjika. Maro ny alika tsara ny tompoin'ny olombelona’ miraiki-po lalina, fa ny alika dia tsy afaka manao toy izany koa safidy. Dia ny olombelona izay mila ny lehibe spawned canine fitiavana raharaha.
Olombelona dia nanapa-kevitra ny hitondra alika ho ao an-ivon'ny fiainany. Fa ny fikarakarana rehetra momba ny zon'ny biby, alika tsy hisy. Tsy mahazo manao mpanjifa fanapahan-kevitra. Miankin-doha ry zareo aminay noho ny zavatra rehetra ilainy ny ho tafavoaka velona. Izy ireo dia tsy afaka miresaka indray; dia tsy misy lazao hoe momba ny tontolo na hoavy.
Na dia ny alika no nanampy, ary niara-niasa tamin'ny olona nandritra ny an'arivony taona, izany afa-tsy am-polo taona vao haingana fa efa tonga mba ho hita ho toy ny zavatra hafa mihoatra noho ny (angamba mihoatra noho ny) biby. Pet-ny fitandremana dia nalaza teo amin'ny mpanankarena sy ny mahery ao fahiny, biby nanamarika ethicist James Serpell ao amin'ny boky sy ny Human biby Society: Fanovana Perspectives, nefa tsy hahazo fanajana lehibe miely patrana hatramin'ny faramparan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, fotoam-mitombo ny siansa sy ny hafanam-po ara-boajanahary sy ny fitomboan'ny tantara miahy ny biby’ fifanampiana. Nanomboka tamin'izay, ny firaiketam-po amin'ny alika dia Nihamafy be. Isika olombelona dia tsy mbola akaiky kokoa karazam-biby hafa. Isika dia mandany am-polony maro an'arivony tapitrisa dolara eo amin'ny fikarakarana, sakafo, sy ny voly; omeo anarana olombelona; miresaka amin'izy ireo toy ny hoe afaka mahatakatra antsika; mino dia fantany izay milaza amintsika ho tambin'izany.
Izany fihetseham-po fotsiny mamatopatotra matetika alika eo amin'ny zavatra ilaina sy ny hoe tiana. Dia mahazatra ankehitriny, na dia mety ho manafintohina na dia ny taranaka lasa izay, mba hihaino ny olona hoe tsy misy fialan-tsiny na menatra fa tia ny alika noho izy tia ny ankamaroan'ny olona, fa izy ireo mahita ny alika ho mpikambana ao amin'ny fianakaviana, fa amborahana ny tena olana sy ny zava-miafina akaiky ny alika, izay tsy mivadika kokoa noho ny ray aman-dreny sy ny fahazavan-tsaina, mpivady, tia, na ny namana. Mandany andro vitsivitsy tao amin'ny biraon'ny vet ho toy ny ampahany amin 'ny fikarohana ny boky, Gaga aho nahita hihaino vehivavy iray rehefa faniriana hafa, “Jereo, Doctor, Afaka miaina tsy misy vadiko, fa anananao ao ve ianao mba hamonjy io alika!” Nefa vets milaza amiko izy hihaino izany ny fotoana rehetra.
Ary tsy avy amin'ny vehivavy. Fikarohana fitondran-tena ny vehivavy fa ho tia alika amin'ny ampahany, satria toa mbola sarotra manohana pihetseham-po, afaka mahatakatra ny tompony ao amin'ny lalina na fomba wordless. Mandritra izany fotoana izany, olona tia alika satria lavorary izy ireo pals, toerana faly mandeha sy manao zavatra, saingy tsy afaka ny hanao na tinady resaka. Toy izany na tsia, ny alika’ upbringings taratra antsika manokana. Dia manamarika ny alika ny fomba nitondrany izahay, na ny fomba izay iriantsika mba ho 'e efa. Na izany na tsia, pasts manokana lalina no mamolavola ny toe-tsaina mikasika ny alika sy ny fomba manofana sy mifandray aminy.
Matetika izany no dingana iray tsy mahatsiaro tena. Vitsy ny tompony-tena mitondra fanentanana ny canine fifandraisana na handinika ny fianakaviany, rehefa niantsoantso mafy izy ireo teo ny alika ho avy, na coo azy ireo toy ny azony. Sekoly iray mpanampy mpitsabo fantatro nisambotra azy alika amin'ny sofiny isaky ny alina, rehefa tonga teo an-trano izy, niantsoantso, “Tia ahy ve ianao? Ny mamy aho Neny a?” Nanontany tena izy hoe nahoana ny alika Niezaka nihazakazaka eny mandritra ny tongotra.
Toy izany koa ny antony mahazo ny alika lasa manan-danja, raha manahy momba ny hahasoa, ary te ho tsara fifandraisana. Ao ve ny valin 'ny nahoana-a-alika fanontaniana fa mora kokoa ny mitady namana avy amin'ny biby miankin-doha noho ny amin'ny olona iray? Tianao ve ny alika noho ny subliminal hafatra avy amin'ny TV sy ny sarimihetsika? Ve ianao hanatona kokoa mamonjy ireo biby noho ny fiofanana sy ny fiainana miaraka aminy?
Moa ve isika hifehy amin'ny fomba famaizana izahay, mangataka ny haavon'ny ny fankatoavana sy ny fahalavorariana nanontany ny antsika, nanakiana azy ireo eo amin'ny feo sy ny teny renay? Moa ve isika efa-pianakaviana reenacting tantara, miezaka manasitrana fijaliana? Afaka milaza amim-pahatsorana isika fa na ny olon-kafa ao amin'ny tokantrano dia vonona ny handray andraikitra fihetseham-po ny alika, tsy tia, fa mampiofana sy mikarakara azy?
Ny vehivavy iray atao hoe Susan nilaza tamiko fa te alika satria nahatsapa azo antoka ao amin'ny gritty, nahantra manodidina amin'ny Elizabeth, New Jersey. Ka dia nahazo ny teny anglisy be mastiff ka ny tompony no ela fa nahatonga azy hanome azy, dia mpiandry ondry alemà atao hoe Thunder. Ny amboa no fomba mahomby hiarovana ny trano, miampanga ny varavarana, rehefa avy amin'ny olon-tsy fantatra. Fa satria Susan, izay miasa ho toy ny New Jersey Transit mpitarika, eken'ny izy dia mahantra mpampiofana amin'ny loatra koa ny miara-miasa amin'ny alika, dia tsy maintsy hanidy Thunder tao ambany lakaly, rehefa nitsidika namana na ny havana. Izy tonga an-trano 's mba hahita maro tapa-shredded namany Sary; ny alika mahita valopy tsaina avy amin'ny varavarana slot ho toy ny hampidi-doza. Izy 's koa hisolo nahavita varavarana sy ny varavarankely simba.
By izao, Thunder milanja kilao, ary sivi-folo kosa dia misarika Susan manerana ny sisin-dalana, rehefa mandray azy izy. Ny mpiara-monina sy ny zanany azy ny tahotra isika, na dia ny tsy tena voakaikitra na ratraina olona. Ny alika Toa tsy tia ady loatra toy ny feon'ny; Izy no manao ny asa dia nokaramaina hanao, niharan'ny ny fahombiazana. Fa Susan, izay milaza izy tia Thunder, eken'ny fa tsy tena naniry ny alika ho azy tenany ihany. Dia angamba tokony ho naka ny fiarovan-tena Mazava ho azy fa na ny antsoina hoe fiarovana-fanairana orinasa fa tsy. “Ho mora vidy kokoa any aoriana any, ary mora kokoa.”
Ny fahatakarana ny antony tiantsika ny alika no ivon'ny fisafidianana ny tsara fanahy, fampiofanana azy ireo araka ny tokony ho, miaina amin'izy ireo am-pifaliana. Arakaraka ny hahatakatra momba ny tenantsika, ny safidy tsara kokoa isika, dia azo inoana fa hanao ho an'ny karazam-biby.
Rehefa mieritreritra momba izany, angamba ianao mahafantatra olona be dia be, izay mitaraina fa ny alika dia mazoto loatra na mipetrapetraka loatra, liana loatra amin'ny manenjika squirrels na variana loatra ho avy, rehefa niantso, koa miaro ny amin'ny trano izy ireo, na izany nonthreatening Te hanampy hanatanteraka ny zava-tsarobidy. Na ny alika matetika mahazo ny tsiny, isaky ny tsy nanao ny tompon-javatra mampalahelo na noheverina ho ratsy safidy. Noho izany, ny alika dia teo ambanin'ny faneren'ny mba ho zavatra hafa noho izay dia, raha ny olombelona ny tanan. Miaraka eritreritra kely sy ny fikarohana, ny fiainan 'ny alika sy ny vahoakany be dia mety ho mora kokoa sy mahafa-po kokoa. Fa izay manao ny sasany mitaky fahatakarana ny olona iray sy ny fihetseham-po ny psikolojia, hevitra momba ny toerana misy antsika eo amin'ny fiainantsika manokana sy ny fomba ny alika hahay hifandray amin'izy. Jim, ny mpihaza mipetraka akaiky ahy any avaratr'i New York, foana telo beagles amin'ny malalaka tarehy ho azy manokana 360 andro isan-taona. Dia tafavoaka ho ora maraina vitsivitsy eo amin'ny hafa ahafahany manara-maso dimy andro lalao. Mandany fotoana be dia be miandry, fa rehefa tonga ny fotoana, dia mitifitra avy amin'ny tarehy ho azy manokana, ary ho any an-ala. “Lehibe izy ireo alika,” Hoy i Jim, izay tsy dia atao hoe azy.
No te manana azy ireo? Nanontany azy aho indray mandeha. “Rehefa manao ny asa ataoko,” dia ny valin-. Mahatsapa reflexively nalahelo noho ny alika rehefa mitondra fiara amin'ny, indrindra rehefa mandinika ny ny alika’ ampihantaina, fiainany, fa ny alika Jim, raha mafy ry zareo, toa tsy mahafantatra izy ireo hoe ory. Tsy ny rehetra mety ho velona ny alika izany. Fa ny beagles Jim mampiseho ny mahay mampifanara-javatra nanaitra ny alika. Ry zareo mba hihaza, fotoana. Jim manana vady sy zanaka efatra izay ny voatokana, ary izy dia efa lasa miasa mafy ny fanorenana; tsy mila ny alika mba ho fialam-boly na ny confidants. Indray mandeha isan'andro, dia avy ny lohan'ny ny tarehy ho azy manokana miaraka amin'ny siny ny hena sy ny sisa tavela sy ny tosses ny anatiny ho ao an-tarehy ho azy manokana. Amin'ny Krismasy, dia manampy amin'ny siny ny mofomamy. Dia mahazo ny tifitra rehetra, ka jereo ny vet raha marary ianao. Ny beagles mbola tsy tao an-tranony. Dia miresaka momba azy ireo tamim-pireharehana sy pitiavana, fa ry zareo fitaovana, toy ny drill na basy vaovao, tsy kely ny olona, tsy tena biby fiompy tao amin'ny heviny ankehitriny. Nefa toa afa-po ny alika sy ny ara-pahasalamana. Jim mahalala indrindra nahoana izy no te azy ireo. Izy ireo hahatakatra ny fitsipika tsotra sy, satria tsy olombelona ny alika fahafantarana ny fandehan'ny fotoana, Tsy ela izy ireo hahafantatra ny fomba mandeha eo mihaza. Mety tsy ho ny fomba maro amintsika no maniry ny hanana alika, fa ny mazava momba ny karazana alika tiany, ary nahoana no toa miasa tsara ho an'ny olona rehetra mandray anjara.
Avy eo dia misy Andrea, mpanakanto izay mipetraka amin'ny toeram-pambolena mirefy amby dimam-polo tany Vermont. Noho ny antony isan-karazany sarotra, izy ny nadabony ny momba an 'ny hevitra ny olona, fanambadiana, fianakaviana; fa tsy, Nitady izy fanavotana collie vondrona. Izy, koa, Nahatakatra mazava tsara ny antony tiany ny alika, ary ny andevo dia ny namorona tamin'ny an'ny renibeny toa mba hahatonga azy ireo na mahafaly.
“Mbola tsy tao amin'ny fifandraisana tsara vintana, fara fahakeliny, tsy mbola,” Hoy izy. “Fa ny bitsika ary tiako fatratra ny hafa. Aho dia mahafinaritra taminy, ary manome fampiononana be dia be ahy sy ny fitiavana. Manantena aho fa izy 'S tetezana ho fifandraisana hafa, fa raha tsy, Ho ao tsara aho.”
Tsy ho ahy ny milaza sy ny fahamarinana tsy afaka manapa-kevitra raha tena Andrea nanao safidy hendry, na ara-pahasalamana. Nieritreritra anefa izy momba ny antony manosika, ny fomba ny alika ho tafiditra any amin'ny fiainany, ary izy nanao fanapahan-kevitra raisina.
“Satria ny ankizy Efa nangataka ny iray” dia, etsy ankilany, Matetika olona ahiana antony hahazoana ny biby. Izany ny hitsaharanao iraisana, fa toy ny Krismasy nividy alika tsy ampoizina ny mitaky ny ankizy matetika dia manana fotoana ratsy izany. Fampanantenana hahazo atao sy adino; liana tamin'ny newcomer tampony, dia wanes.
Tsy foana. A roa ambin'ny folo taona ny ahy namana nangataka retriever volamena tamin'ny taon-dasa noho ny Krismasy sy ny ray aman-dreniny dia nanaiky, ny fepetra izay Jeremy handray andraikitra ho azy. Angamba natoky izy ireo fa raha ny marina satria nihazona izany andraikitra izany ho efa nanaporofo ny fanoloran-tena amin'ny famahanana ny trondro sy ny fanadiovana avy hamster cages.
Na ahoana na ahoana, Jeremy no hikarakara Clancy. Dia mandeha izy aloha sy aorian'ny fianarany, mamelona azy, borosy azy, nitondra azy kilasy fiofanana isaky ny Sabotsy. Isan 'andro rehefa avy mianatra, Jeremy sy miara-mampiofana Clancy. Ny amboa dia nianatra ho avy, rehefa niantso, ny mipetraka, mijanona, ary handry amin'ny didy. Olona any ambanivohitra tsara 4-H fandaharan'asa mahalala salama dia mety ho ny ankizy mba handray andraikitra ho an'ny biby. People amin'ny zaza- ary ny alika adalana tany manodidina azy ny fitsipika izay matetika no toa ho, ny kelikely kokoa ny tokotany, ny lehibe kokoa ny alika mahalala fa tsy mahazatra. Fa Jeremy, fahazoana ny alika no toa toy ny zavatra tsara; dia nitandrina ny teniny, na angamba ny ray aman-dreniny nandray ny dingana tsy mahazatra ny manizingizina fa hitandrina izany. Na izany na tsia, Efa nahita ankizy vitsivitsy tahaka azy. Ray aman-dreny, mitandrema: olona ao amin'ny tokantrano tsy maintsy handray andraikitra voalohany ny alika, ary raha tsy ny ankizy, Neny na i Dada dia ho dingana.
Ray aman-dreny ny ankizy matetika no manome ny zavatra heveriny fa tsara ho azy ireo finday, solosaina, alika tsy nieritreritra lalina momba ny fomba izany no ampiasaina na nitondran'izy araka ny fividianana.
Koa nahoana ianao no te alika?
Raha ny valin-, ampahany, paharoa avy amin'ny saro-pihetseham-po ny tantara (tahaka tokoa ny raharaha amiko), makà antoka fa azonao, dia mieritreritra fotsiny amin'ny alalan'ny inona izany izay angatahinareo ny biby. Na dia eo aza ny fahazarana ny anthropomorphizing alika, tsy hoe inona no 're-misaina ary afaka mahatakatra ny tsy mety mahay manavaka ny fihetseham-pony indraindray andraikitra mangataka azy ireo mba hameno. Tsy afaka mitondra tena na dia amiably alalan'ny famaritana raha toa ka tsy araka ny tokony ho voafidy, naneho, sy nampiofana. Koa satria ny fanantenana dia matetika be loatra, dia lasa diso fanantenana, na mora tezitra. Mitana misy porofo fa olana isika dia mamorona amboa biters, chewers, barkers, neurotics mila antidepressants. Izany no mitranga satria maro ampahany ny olona mahazo ny ratsy amin'ny ratsy alika fotoana noho ny antony ratsy. Misy ny singa ara-moraly mba handray amin'ny alika. Na dia tsy mahavita ambonimbony kokoa ireo dingana hevitra, Azo antoka fa manana fihetseham-po alika. Dia hiaina fanaintainana sy ny very, ny tahotra sy ny fitiavana. Izany dia nanome azy ireo sy ny biby hafa ny fitondran-tena ny sasany raha nijanona teo afovoany ny olona ny feon'ny fieritreretana. Mety hahatonga azy ireo tsy mitovy amin'ny ankizy, fa izany no adidintsika noho ny mieritreritra ny fomba itondrantsika azy ireo. Fa ny alika rehetra dia tsy ho an'ny olona rehetra. Tsy manaiky ny mitombo, ara-politika entin'ny hevitra hoe alika koa rehetra mendrika ny famonjena, fa ny alika rehetra dia mitovy indrindra ny mahay mampifanara-javatra ny fihenjanana, be olona, litigious olombelona tontolo iainana. Tsy mahita fa tena marina izany. Ny alika no ferociously miavaka, wildly miovaova arakaraka ny karazany, fototarazo, fako traikefa, fitsaboana, sy ny tontolo iainana. Ny sasany dia Genial sy tony, niteraka ny toetra, ary ny sasany dia mahery setra, niteraka sy nanofana ny mihaza, na ady. Vitsy amintsika no manana ny fahaiza-manao na ny fotoana fanofanana handika ny didiko rehetra ireo fihetsika. Ny safidy ratsy ny alika dia afaka manaporofo ny nofy ratsy ho anareo, ny fianakavianao, sy ny fiaraha-monina; ny marina iray, Fifaliana.
Misy alika mila miasa, ny sasany aza; Hanafina ny sasany raha ny hafa avy any kotrokorana dia tsy tsikaritsika izany; fankahalana ny olona sasany ao amin'ny satroka sy ny olon-kafa hividy bisikileta. Tsy afaka mahafantatra ireo foana oddities mialoha; Vao mainka izany antony hitohy nitandrina.